Dhulka ma innagaa naloo abuuray? – Kaasho Maanka
Dhulkaan aan ku dhaqannahay korkiisa boqolkiiba 71 (71%) waa bado ayna dadku ku noolaan karaynin. Boqolkiiba 29-ka (29%) soo hadhay, saddex u dhig hal dhig, ama 33% waa saxaro iyo lama dagaan. Halka dhig ee soo haray, 20 million oo kilomitir in kabadan waa qaaradda Antarctica iyo Arctic oo ah baraf iyo lama dagaan uuna dadku ku noolaan karaynin noloshuna suurta gal ku ahayn!
Biyaha adduunkaan laga helo 96% waa biyo dhanaan oo uuna dadku cabbi karayn. 4%-ta soo hadhay ee ah biyaha macaan, 68% kamid ah waa biyo kujira barafyada iyo Glaciers-ka laga helo meelaha aadka u qabow sida qaarada antaractica. Waana biyo ay adagtahay in ay uunku manfacsadaan.
Dhirta ka baxda dunidaan guudkeeda waxaa lagu qiyaasaa in ay tahay ~400,000 oo nooc. Bini’aadamku laakiin wuxuu ka cunaa wax aana dhamayn 200 (0.05%) nooc bes. Waxa kale waa wax sun ah, wax uuna dheefshiidkeennu xamili karayn ama wax aana nafaqo iyo faa’iido inoo lahayn!
Xoolaha adduunkaan ku nool waa 8.7 milyan species ama noocyo. Waxaan ka cunnaa kaliya dhowr nooc oo xattaa boqollay ahaan ahayn wax la sheego. Badankooda ma naqaanno ama ismaba aragno. Inta soo hadhayna waxay isugu jraan kuwa inana dila, cudurra inoo keena, kuwa sumaysan ama kuwo wax ma galaan waxna ma gooyaana oo waa iska cayayaan ah.
Iyadoo ay sidaas tahay haddana intaas naloogama harin ee intii yareyd ee dhulka inooga soo hartay waxaa inoogaga dabo yimid daadad, duufaanno, sunaamiyaal, dhulgariiryo, fulkaanooyin iyo kumannaan dhacdooyin oo burbur iyo dhibaato mooyaanee uumiyaha manfac u lahayn!
Intaas aan soo carabaabay iyo kumannaan kaloo aana inta lagu wada xusi karayn ayaa sababay in 99.9% noocyada noolayaasha ahaa ee dunidaan ku noolaan jiray ay dabar go’aan! Hadda nooc(species) marka laga hadlayo ma’ahan hal geel iyo laba geel ee geela ayaa nooc(species) la isku dhahaa.
Maantadaan la joogo 150 nooc oo noolayaasha kamid ah ayaa dabar go’a oo waxba ka harin subax kasta ooy qoraxi soo baxdo. Waa ayadoo maalinkasta adduunka uu ka tirmo wax geel, ari, faras iyo shabeel(ilaa 150 gaarsii) la yidhahado oo dhan oo dambe dib loo arkayn!
Mooro mala oran karaa xeen ari ah baa loo ooday haddii 90% mooradaas ay tahay meel uuna arigu ku noolaan karayninba? Haddii inta soo hadhayna ay tahay meel bahalo galeen ah oo ayna ku hoyan karayn habeen qudhaa xataa ayagoona geesaha iska eegayn? Haddii sun iyo cudur iyo waxkasta oo dhiba ay meesha kula oodan yihiin? Haddii 99.9% kamid ah ay meesha ku dabar go’day dhibaato lagula xiray moorada awgeed?
Dhulkaan ma’ahan wax shay caqli badan oo naxariis badan oo aana qaldamin uu u abuuray si noolayaasha, qaasatan dadka ay ugu noolaadaan ee waa dhagax cireed qorraxda ag heehaabaaya oo ay noloshu isku nabayso iyadoo ay waxkastaba isku dayayaan in ay dabar gooyaan.
W/Q: Cabdisaciid Ismaaciil
Akhlaaq, anshax ama damiir (Morals) waxaa si fudud loogu qeexaa in ay tahay kala garashada saxa iyo khaladka, samaha iyo xumaha, in la kala sooco waxa ay tahay in la sameeyo iyo waxa ay tahay in laga fogaado,…iwm.Akhlaaqdu waa arrin lamahuraan u ah jiritaanka bulshada. Suurogalna ma ah in bulsho jirto haddii aysan lahayn xeerar nidaamiya xiriirka xubnaha bulshada midba inta kale la wadaago, oo u...
Qaybta: Aragtiyo, Quraan
Dadka muslimiinta ahi waxay ku nool yihiin xaalad carruurnimo oo xagga garashada ah inay koraanna si ku talo gal ah ayay u diidan yihiin, Waa dad jecel hadii ay guulaystaan inay guushaa u nisbeeyaan Illaah xagga sare fadhiya haddii ay jabaanna jabkaas naftooda ama gaalada ayay ku eedeeyaan, waxaa loo baahan yahay in muslimiintu runta isu sheegaan oo maankooda adeegsadaan kana talo baxaan...
W/Q: Saacid Kaahiye 21st July 2020